Monday June 03, 2019 - 10:53:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weeraro khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Marka ayaa sheegaya in weerar dhabagal ah uu qabsaday kolonyo ciidamo Bangaraaf ah xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Aala Yaasir ee kaabiga ku haya garoonka Lambar50.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay weerarka ku gubeen gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka Mareykanku Tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan.
Warar laga helay deegaanka Aala Yaasir ayaa xaqiijinaya in gaariga oo gubanaya uu yaal wadada hareeraheeda waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday dhammaan ciidamadii gaariga la socday sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dhinaca kale weerar dhabbagal ah ayaa lagu qaaday ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa Jabuuti, weerarka oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ayaa waxyeello lagu gaarsiiyay ciidamada AMISOM.
Xoogag katirsan Al Shabaab ayaa wadada ugalay ciidamada Jabuuti waqti ay isaga kala gooshayeen bariga iyo galbeedka degmada Jalalaqsi, sidoo kale Al Shabaab ayaa xalay weeraray saldhigga ciidamada Nabad sugidda ay ku leeyihiin deegaanka Siinka dheer ee duleedka Muqdisho